Qunsulka Soomaaliya ee Imaaraadka oo kulan la yeeshay Jalliyadda Soomaaliyeed”sawiro” – Radio Muqdisho
Qunsulka Soomaaliya ee Imaaraadka oo kulan la yeeshay Jalliyadda Soomaaliyeed”sawiro”
Dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa kulan wada tashi ah waxaa ku yeeshay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankaas iyo Qunsulka Soomaaliya ee dalkaasi Axmed Daahir Maxamed waxaana u jeedada kulanka aheyd sidii loo sameyn lahaa madax ay yeeshaan Jaalliyadda halkaasi.
Kulanka oo lagu qabtay magaalada Abu Dubai ee caasimadda ayaa intii uu socday waxaa mas’uuliyiintii ka hadashay ay sheegeen in ay ahmiyadda balaaran ay leedahaya in Jaalliyadda ay yeelato dad matala isla markaana ka hadla danahooda.
Qunsulka guud ee Soomaaliya dalka Isutagga imaaraadka Carabta Mudane Axmed Daahir Maxamad oo kamid ahaa mas’uuliyiintii kulan kala qeybgashay Jaalliyadda ayaa sheegay in bisha Fibraayo ee sanadkan soo socoda la qaban doono shirweyne balaaran oo lagu dooranaayo Guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen oo ay yeeshaan Jaalliyadda Soomaaliyeed ee Wadanka Isutagga Imaaraadka Caranta.
Wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa ku nool Jaalliyad balaaran oo Soomaali ah,waxaana mudooyinkii dambe ay mas’uuliyiinta Safaaradda iyo Qunsuliyadda ay wadeen dadaalo ay ku doonaayaan in ay Jaalliyadda ay ku mideeyaan.
Madaxda maamullada K/galbeed iyo Jubba oo wadahadallo ku leh magaalada Kismaayo
Barlamaanka oo maanta ka dooday Miisaaniyadda sanadka 2015-ka